महानायक राजेश हमाल विवादमा
Homeसमाचारमहानायक राजेश हमाल विवादमा
October 12, 2020 admin समाचार 10070
महा’नायक राजेश हमालले केही समय यता जातिय छुवाछु’त विरुद्धको टेलिभिजन शो कार्य’क्रम संचालन गर्दै आएका छन् । जातको प्रश्न टेलिभिजन का’र्यक्रमको केही भाग प्रशारण भइसकेको छ । त्यो कार्यक्र’ममा जातिय छुवाछुत विरुद्धका विषय उठान गरिन्छ । तर अहिले सोही कार्यक्र’मका कारण उनी विवादित भएका छन् । सामाजिक सञ्जा’लमा केही प्रयोगक’र्ताले उनको आलो’चना गरेका छन् ।
आलोच’नाको गर्नुको पछाडी उनले पस्तुत गरेको विषयव’स्तु नभएर सो कार्यक्रम उत्पा:दनका लागि लगानी गरेको डोनर:का कारण हो । समता फाउण्डे’शनले तयार पार्ने सो कार्यक्र’मको मुख्य डोनर क्रिश्चियन एड भएको खुलेपछि महानाय’कको आलो’चना भएको हो ।
क्रिश्चिय’नहरुको मुख्य उद्दे’श्य हिन्दु वाहुल्य र विपन्न मु’लुकमा जातिय कुरा उठाएर हिन्दु धर्म प्रति वितिष्णा जगाउने भएकाले त्यस्तो उद्धेश्य लिएको संस्था’ले दिएको पैसावा’ट का’र्यक्रम चलाउन नहुने भन्दै आलो’चना गरिएको हो । तर केहीले भने लगानी कसको हो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यस’मा उठाइएका विष’य बस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।
‘राजेश हमालले आफ्नो महाना’यकको ताजको गरिमा बचाउन चाहन्छन् भने यस्तो विवा’दास्पद कार्यक्रमबाट चाँडोभन्दा चाँडो पन्छिनु उत्तम हुन्छ’, पत्रकार चिर’ञ्जीवि पौडेलले फेसबु’कमा लेखेका छन् ।
यसबारे उनले थप लेखेका छन्, ‘नेपालमा छुवा’छुतको समस्या पहिलेजस्तो डरलाग्दो अ’हिले छैन । तर पनि जातीय विभेदका केही अवशेषहरु बाँकी छन् । शिक्षामा बढ्दो पहुँचसँगै यो समाधान हुँदै जान्छ । एउटा क्रिस्चि’यन संस्थाले डलर खन्या’एर छुम’न्तर हुने होइन ।
क्रिस्च’यन एडको प्रष्ट रणनीति छ, अल्पवि’कसित एव अविकसित देशहरुमा पसेर जातीयताको नारा उराल्न सहयोग गर्ने र धार्मिकर जातीय अल्पसंख्य’कहरुलाई हा’तमा लिएर आफ्नो मिसन पुरा गर्ने ।
राजेश हमाल’लाई मोहरा बनाएर सञ्चा’लनमा ल्याइएको ‘जातीय प्रश्न’ भन्ने टेलिभि’जन कार्यक्रम यही मिस’नको एउटा कडी हो । आवरणमा यो कार्यक्रमले जातीय छुवा’छुतविरुद्ध जनचे’तना फैलाउने उद्देश्य राखेको छ । तर, अन्त’र्यमा यसको अभिष्ट नेपा’लमा विभिन्न जातजातीबीच वि द्वै ष चुर्का उँदै हिन्दू ध’र्मप्रति अनास्था फैलाउने नै हो ।’
तर, चिरञ्जी’विको मतभन्दा फरक विचार अर्का पत्र’कार तथा चलचित्र निर्देशक र समी’क्षक दीपेन्द्र ला’माको देखिन्छ । आफूले ‘जातको प्रश्न’का सबै शृंख’ला हेरेको र कतै पनि क्रि’स्चियन धर्मको प्रचार गरि’एको नपाइएको उनको भनाइ छ ।
यसबारे लामाले फेस’बुकमा लेखेका छन्, ‘मैले ’जातको प्रश्न’का सबै शृंखला हेरेँ, कतै पनि क्रि’स्चियन धर्मको प्रचार गरि’एको पाइएन । त्यसैले यस’मा कसको लगा’नी थियो भनेर र डा को मच्चा’उन जरुरी छैन ।’
‘कुरै गर्ने हो भने, नेपा’लीलाई लिटो बनाउन सिकाएर कुपो’षणबाट जो’गाउने पनि क्रिस्चि’यन कुइरेनी दिदी नै थिइन् । खोज्दै गयो भने साबु’नले हात धुन सिकाउने, कुष्ठरो’गीलाई माया गर्न सिकाउने, पोलियो थोपा खान सिकाउ’नेहरु क्रि’स्चियन नै थिए होलान् ।
त्यसैले क्रि’स्चियन शब्द देख्ने बित्तिकै थरर्र काँ पे र पक्ल’क्क बे हो स हुनु भएन । धेरैलाई लगा’नीकर्तासँग होइन दलितका विषयमा उठान गरिएका सवाल’देखि अस’न्तुष्टि लागे’जस्तो देखियो । म त भन्छु, यस्ता कार्य’क्रम अझै धेरै बन्नुपर्छ । क्रि’स्चियन होइन अ ल का य दाले लगा’नी गरे पनि मन्जुर’, लामाले फेसबु’कमा लेखेका छन् । -इताजा खबर बाट
जनतासंग माफी माग्दै रोए किम जोङ (भिडियो हेर्नुहोस्)
‘हिजो जस्तो लाग्छ’ गीतमा आकाश र गरिमाको अभिनय (भिडियो हेर्नुहोस्)
श्रीमानलाइ छोडेर १ महिना अन्तै गएकी श्रीमतीलाई दिपकले फेरी ल्या’ए, भयो पुनः र्मिलन (भिडियो सहित)
March 10, 2021 admin समाचार 4464
भिडियो तल दिइएको हेर्नुहोला: श्रीमान् श्रीमती एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । रथको एक पांग्रा वि’ग्रिए वा नभए रथ अगाडि जान सक्दैन त्यस्तै श्रीमान् श्रीमतीबीच सम’स्या उत्पन्न भयो भने रथ रुपी सम्बन्धपनि अघि बढ्न सक्दैन
घट्यो अमेरिकी डलरको मूल्य, कुन देशको मूल्य कति ?
May 19, 2021 admin समाचार 4240
मंगलबार (जेठ ४) एक अ’मेरिकी डलरको खरिददर ११६.८४ रुपैयाँ र बिक्रिदर ११७.४४ रुपैयाँ काय’म भएको छ । अघिल्लो दिन एक डलरको खरिददर ११६.९६ रुपैयाँ र वि’क्रिदर ११७.५६ रुपैयाँ थियो । पछिल्लो समय अमे’रीकी डलरको मूल्य
November 30, 2021 admin समाचार 2127
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214199)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182562)